घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू पल ग्याँसकोगेगो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल लिजेंड प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नामले उपनामद्वारा जान्छ; "Gazza"। हाम्रो पल ग्याँसकोनिज बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्य धेरै र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, हरेकलाई थाहा छ कि उनी इङ्गल्याण्डका लागि एक-अर्काको रचनात्मक, कडा-कामकाजी, र प्राविधिक रूपमा चालक खेलाडी थिए। तथापि, आजको फुटबल फ्यानहरूको मात्र केहि हातले पावल ग्याँसकोग्ने जैवको बारेमा धेरै चिन्ता छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
पॉल जॉन ग्याँसकोन्गे जन्मिएको थियो डनस्टन, युनाइटेड किंग्डम मा 27 मई को 1967th दिन। उनी आफ्नो आमा, क्यारोल (एक फ्याक्ट्री कर्मचारी) र तिनका बुबा, जॉन (एक ह्याड क्यारियर) मा जन्मिए। जन्मको दिन, तिनका आमाबाबुले पावललाई नाउँ दिएका थिए पावलले पावल म्याकार्टनी र बिटल्सको लेट जॉन लिनेनलाई।
पावल ग्यासकोग्ने बचपन कथाको हाम्रो संस्करण रोचक छ, यदि असामान्य छैन - हामी तपाईंलाई एक अस्थिर र सडक बच्चाको कथा दिन्छौं जुन असाधारण प्रतिभाको साथ आशिष् भयो। खालीपन फुट्यो जब फुटबल उनको खुट्टामा देखा पर्यो।
बढ्दै गयो, पावलले ब्रेकनेबेन्स जुनियर हाई स्कूलमा भाग लिनुभयो, त्यसपछि गेट्सहेडको कम फेल क्षेत्रमा हेथथफील्ड सेन्टर हाई स्कूल। उनको बचपन अस्थिरता, उदासी र त्रासदीद्वारा चिनिएको थियो किनभने तिनको विनाशहरू पहिलेको सतहमा टाइनसाइडमा उनीहरूको विनम्र सुरुवात भयो।
उनको राक्षसले बताए जब मृत्युले 10 उमेरमा अनुहारमा उनको डरलाग्दा स्थानीय पसललाई आफ्नो मित्रको सानो भाइ, स्टीवन स्प्रेग्गोन लिनुभयो। ग्याँसकोइजिङ हुँदा थिए "चक्कर लगाउँदै" जवान डार्वेन्ट वाटर रोडमा हिँड्ने पछि मर्नुभयो र एउटा आइसक्रीम वानबाट ठिकिएको थियो। यो पहिलो मृत शरीर थियो जुन मैले देखेको थिएँ र मलाई स्टीफनको मृत्यु मेरो गल्ती थियो। म अझै पनि मेरो दिमाग दुर्घटनामा जान्छु। बस यसको बोलाउन सक्छु। " Gascoigne लाई सम्झियो.
फेरि, उनले थप त्रासदीको अनुभव गरेपछि तिनले आफ्नो अर्को मित्रलाई देखेपछि मसिनो दुर्घटनामा मर्छन् जब उनी भवन भवनमा Gascoigne को चाचाको लागि काम गरिरहेका थिए। यस समयको पछाडि दुखाइको कुरा, तिनको बुबाले हिउँदबाट बच्न थाले। बच्चाहरु को रूप मा धेरै दुखाइ को माध्यम ले पारित Gascoigne को विकास को निरीक्षण र संकल्प जो उनको उपचार मा समाप्त भयो। यो पनि एक समय थियो जब उनले सडक मा फुटबल खेलना शुरू गर्यो। पावलले एकपटक प्रकट गरेपछि तिनले विचार सुरु गरे "मृत्यु सात वर्षको उमेरमा फुटबल खेल पछि घर चलिरहेको बेला।"
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको कारण
आफ्नो खालीपन समाप्त गर्न, उहाँले आफ्नो जवानमा फुटबल लिनुभयो। पिट्स फुटबल स्काउट्सले गर्दा गेट्सहेड ब्वाइजहरूको खेल खेल्न थालेको भए तापनि इप्सविच टाउनमा परीक्षणमा प्रभाव पार्न असफल भयो। मिडल्सब्रो र साउथामप्टनको थप परीक्षण पनि असफल भयो, टोलीले उनीहरूलाई समर्थन गरे भन्दा पहिले, नयाँ क्यालेन युनाइटेडले उनलाई 1980 मा स्कुलको रूपमा हस्ताक्षर गरे।
पोल सामान्यतया थोरै थियो जब नयाँ क्यासललाई साइन इन गरियो र प्रायः आफ्नो साथी जिमी गार्डनर ए.ए. संग समस्यामा पर्यो "पाँच बेल्जियम", खास गरी जब जोडीलाई अदालतमा लगाइएको थियो र एक हिट र दौडमा आक्रमण गर्यो। पावलले सबै भन्दा राम्रो जवान खेलाडी हुने मौकाहरू थिए तर तिनका थोरैचरले उनलाई रोक्न सकेनन्। न्यूकैसल अध्यक्ष स्टेन सेमोरले ग्याकोकोगेजको रूपमा वर्णन गरे "जर्ज बेस्ट बिना दिमाग "। अझै पनि एक फुटबल स्टारको रूपमा, ग्यासकोग्नेले एक लतको विकास गरे गेमिंग मिसिनहरु, प्रायः उनको सबै युवा धनसम्पत्ति खर्च गर्दछ। जब पैसाहरू अनुपलब्ध भए, तिनले आफ्नो लत कोषको लागि पसल बनाउने।
15 को उमेरमा, पावलको राक्षसहरूले आंशिक रूपमा उहाँलाई छोडे। उनले आफ्नो दुष्ट मार्गहरू परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे र तिनको परिवार, तिनका आमाबाबु र दुई बहिनीहरूलाई आर्थिक रूपमा प्रदान गर्न कडा परिश्रम गर्ने प्रतिज्ञा गरे। Gascoigne खेलाडीलाई फुटबल खेलाडी परिवारको बाकी भन्दा बढी पैसा कमाउनको लागि सक्षम थिए। उनले फुटबलको आनन्द उठाए र पछि यो लेखे "म फुटबल खेलिरहेको बेला मंगलबार वा मृत्युको बारेमा चिन्ता छैन"।
उनी आफ्नो छैटौं जन्मदिनमा न्यू क्यासलमा एक शिक्षकको रूपमा साइन इन गरिएको थियो। Gascoigne ले नयाँ एनकोलले 1985 मा एफए युवा कपमा विजय हासिल गरे। यसले त्यहि वर्ष वरिष्ठ टोलीलाई कल गर्यो।
Asides न्यूकैसल किंवदंती बनी, ग्याँसकोनिङ्गको एक आन्तरिक क्यारियर थियो जसले उनलाई राष्ट्रिय नायक बनायो। फुटबल साँच्चै उहाँका मात्र शरण र बाकी भए, उनीहरूले भन्थे, अब इतिहास हो।
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक इङ्गल्याण्ड कथा पछि, त्यहाँ ग्लैमरस पत्नी वा प्रेमिका भएको छ।
शेरिल ग्याँसकोगेजले उनीहरूको उच्च-सम्बन्धी सम्बन्ध सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र पछि विवाह गरेकी थिइन् पॉल ग्याँसकोगेज। 1990 वरिपरी भेटिए पछि, तिनीहरू विवाहित थिए ह्याफफील्ड, हर्टफोर्डशायर जुलाई 1996 मा तिनीहरू लगभग6वर्षको लागि सँगसँगै थिए।
दुर्भाग्यवश, उनीहरूको वैवाहिक अशांति र अन्ततः छोटो छोटो थियो, अगस्त 1998 मा तलाक मा समाप्त भयो। पावलको प्रेतहरूले आफ्नो वैवाहिक वर्षको भित्र गुमाएका थिए जसको कारण उनले शराब धर्म र सबै भन्दा खराबको साथ कठिनाई अनुभव गर्थे जुन शारीरिक रूपमा दुर्व्यवहार शेरिल, उनको श्रीमानलाई भोग्नुपरेको थियो। पावलले पनि उनको विवाहको समयमा शेरिल तिर घरपरिवारलाई गम्भीर रूपमा स्वीकार गरे।
तिनीहरूले प्रारम्भिक 1999 मा तलाक गरे। दस वर्ष पछि, शेरिलले एक बोले-सबै पुस्तकको अधिकार प्रकाशित गरे "बलियो: मेरो जीवन जीवित रहजा".
ग्याकोकोग्नेले शेरिलसँग एक छोरा रेजन र उनको विवाहको पहिलो विवाह, मेसन र बियानका शेरिलका दुई छोराछोरीलाई पनि अपनाए। शोकको बावजूद, पावल एक राम्रो बुबा थियो। तल पावल ग्याँसकोगेजले आफ्ना छोरा छोरालाई रेगानलाई आफ्नी श्रीमती शेरिलको जवान छोराछोरी मेसन र बान्कासँग खाना खाए।
बियानका (उपरोक्त र तल देखिए) अहिले एक ग्लैमर मोडेल र टेलिभिजन व्यक्तित्व हो र वास्तवमा टिभी शो लव आइल्याण्डमा देखा पर्नुभयो।
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
पल ग्याँसकोगरे पिता, जॉन ग्यासकोगेजले 72 मा क्यान्सर उमेरको 2018 बाट मरे। उहाँ गेट्सहेडमा आफ्नो छोरा (पॉल), परिवार र मित्रहरूसँग तिर्नु र उनको लागि एकदम राम्रो पठाइदिनुभयो।
उनको मृत्यु हुनुअघि, जॉन ग्याँसकोगेजले 2008 मा काम छोड्न बाध्य भए जब तिनी लगभग मस्तिष्क हिमालयबाट मृत्यु भएको थियो। मध्येको एउटा पावलको सबैभन्दा ठूलो मेमोरीले उनीहरूको नयाँ पुस्तकको सुरुवातमा आफ्नो बुबाको साथको क्षण हो 'Gazza: My Story' 2004 मा।
जॉन र उनको सुन्दर पत्नी केरोलले गेटहेडहेडमा एक परिषदको घरमा चार जना छोराछोरी कार्ल, लिन्डसेना, अन्ना र गजजालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उमेरमा उठाए।
प्रारम्भिक रूपमा, उनका परिवार परिषद्को एक एकल कोठामा एक कोठामा बसेर एक कोठामा बसेर कोठामा बसेर ग्याँसकोगेजको शुरुआती जीवनको समयमा धेरै पटक सारियो। जब त्यो एक स्टार बनेको बेला, जजले आफ्नो पितालाई फेरि फेरि र फेरि तिर्नुभयो - उसलाई घर, एक मर्म र एक चरणमा पाउन्ड 70,000 रोल्स रोयस।
पल ग्यासकोग्नेको परिवार एक पटक भाइरलिंग (कार्ल, केरोल, अन्ना र लिन्डसे) बीचको घरेलु हिंसाद्वारा चिनिएको थियो जब उनको हाउ-वाहक पिताले कामको खोजीमा जर्मनीको नेतृत्व गरे जहाँ उनले एक वर्ष बिताएपछि उनको पत्नी तीन कामहरू समाप्त हुने मिलन यो समय थियो जवान ग्याँसकोनिज उनको आत्मकथा, Gazza मा उल्लिखित उदास, असुरक्षित र आपत्तिहरु संग घनिष्ठ थियो।
ग्याकोकोजिङका पिता जर्मनीबाट फर्किए र उनीहरूको परिवारको स्थिरता अझै पनि अनुपस्थित थियो। यूहन्नाले मस्तिष्क भत्कनुअघि मस्तिष्क हावाग्रस्त अवस्थाको सामना गर्नुअघि धेरै समय लागेन।
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उनी कसरी राष्ट्रिय नायक बने
यो सबै जुलाई4को 1990th दिनमा भयो जब इंग्लैंड टर्लिन मा Juventus को Stadio delle Alpi मा विश्व कप अर्द्ध फाइनल मा वेस्टर्न जर्मनी खेलाडी। दोस्रो चरणमा बेल्जियमको इङ्गल्याण्डको 1-0 विजयको दौडान पहिले नै पिलो कार्ड प्राप्त गरिसकेपछि ग्यासकोइजिङले थॉमस बर्थोल्डलाई बेवास्ता गरेका थिए। जो मतलब थियो कि यदि उनले म्याच जीता यदि फाइनल को लागि निलंबित हुनेछ।
टेलिभिजन क्यामेराहरूले पेल कार्डको पछि लागेका आँखामा आँसूहरू देखाए। यो कार्यले ग्याकोकोगाइनलाई एक लोकप्रिय लोकप्रिय व्यक्ति बनायो सहानुभूति र भावनात्मक ब्रिटिश जनता.
म्याचले पेनाल्टी आउट-आउटमा परिणत गर्यो, जो दुर्भाग्यवश इंग्ल्यान्डले जर्मनीलाई हराएपछि स्टुअर्ट पर्सि र क्रिस वडेले उनीहरूको दण्डमा हराए।
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -मानसिक रोग र शराबको प्रभाव
माथि परेशान पूर्व-फुटबलर को लागी खतरनाक चित्रको चित्र हो र उनी एम्बुलेंसमा सहायता गरीरहेको छ पछि जाहिराले आफ्नो घर बाहिर ढिलो गरे पछि भोको बोतल। प्रशंसक र साथीहरूले उनको छविको सदुपयोग गरे उनी उनको उमेर भन्दा पुरानो देखे, धेरै पीला र पतली।
ग्याकोकोग्नेको पुरानो अल्कोहल समस्या पहिलोपटक अक्टोबर 1998 मा भएको थियो जब उनी एक पेय सत्र पछि प्ररी अस्पतालमा भर्ना भयो उनले व्हिस्कीको 32 दृश्यहरू पिए जसले उसलाई छोड्यो "चट्टान तल". त्यसपछि त्यस प्रबन्धक ब्रायन रोबसन थियो जसले उनलाई बेहोश भएको बेला क्लिनिकमा सहयोग पुर्यायो।
उहाँले 28 दिनको सुझाव दिइएको न्यूनतम अवरोधमा दुई हप्ता जारी गर्नुभयो। प्रतिज्ञाहरू देखेर बावजूद, तिनले अन्ततः डाक्टरका आदेशहरूलाई अचम्म लाग्ने र उनको पूर्ण राक्षसहरू हटाउँथे।
निरन्तर उद्धार र उपचारको अंशको रूपमा, डीजे क्रिस इभान्स, ग्यारी लाइनर, पियर मोर्गन र रोनी ईरानीले उनलाई X.युक्सक्सको लागतमा अमेरिकाको एरिजोनामा पुनर्ववास फर्के। पियर मोर्गनले आफ्नो मित्रलाई प्रोत्साहन दिएका शब्दहरू दिएका छन् किनभने उनले ट्विटरमा यस्तो लेखेका थिए; "Gazza आउनुहोस्, लडाइमा राख्नुहोस्।"
सबै प्रार्थनाहरूको बावजूद, पावलको राक्षसहरू अझै पनि पुनः-सर्फेसन गरेपछि उनी पछि द्विध्रुवी विकारकर्ताको साथमा निमन्त्रणा गरेका थिए जसलाई म्यानुअल डिप्रेसन भनिन्थ्यो। बिरामी, एक मस्तिष्क विकार जसले मूड, ऊर्जा र गतिविधिको स्तरमा असामान्य परिवर्तनहरूको कारण बनाउँछ।
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -गरिब, बिटुन र लडाइँ चोर
नोभेम्बर 2008 मा, Gascoigne एक £ 200,000 कर बिल मा दिवालियापन माग को सामना गर्नु भएको थियो, दुई वर्ष देखि अधिक को लागि कुनै पनि कर रिटर्न दायर छैन। 25 मई 2011 मा उनी अझै पनि £ 32,000 को बावजूद लन्दन को उच्च न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित गर्न देखि बचें।
एक्सएनएनएक्सएक्स डिसेम्बर 27 ग्याकोकोगेजले लन्डन होटलको पछाडि तल पछाडि टाढा दाँत लगायतका टाउकोहरूमा टाउको चोट लगाएर अस्पतालमा भर्ना भएको थियो, जहाँ उनले गवाह गरे अनुसार कथित तौर पर नस्लवादी टिप्पणी गरे। जुलाई 2016 मा उनीहरूको शताब्दीले 2017 हप्ताको लागि जेलमा राख्यो र £ 23 मुआवजा भुक्तानी गर्न आदेश दिए।
जीएनकोमएक्स अप्रिल 17 मा, ग्याकोकोग्ने पछि नायकको रूपमा हेलोवीन भएको थियो, उनले भने कि उनको सामना पोल मा आफ्नो छिमेकीको घरको नजिकै रहेको एक छिमेकीको चोरी हुनेछ। उनीहरूलाई चोट लागेको कारण अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो।
Paul Gascoigne Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -अरूले के केयरको बारेमा के भन्नुहुन्छ
"उहाँ आक्रामक थियो, धेरै शारीरिक, तर एकै समयमा धेरै प्राविधिक, उत्कृष्ट विशेषताहरू जुन तपाइँलाई शीर्ष फुटबलर हुन आवश्यक छ।" - Jose Mourinho
"उनी आफ्नो युगको सबैभन्दा राम्रो खेलाडी थिए, तातो हावाको सास किनभने उनी मुस्कानसँग खेले।" - सर एलेक्स फर्गुसन
"जब म बच्चा हुँ, पावल ग्यासकोग्ने मेरो नायक थियो। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो र म चाहन्थेँ। " - फ्रैंक लम्पर्ड
"उहाँका सर्वश्रेष्ठ फुटबलरहरू मध्ये मैले भनेको छु। उनी धेरै थिए। " - टेरी कसाई
"म सधैं भन्छु Gazza मैले खेलाएको सबैभन्दा राम्रो खेलाडी हो। 1990 मा उनी विश्वकपमा केवल अविश्वसनीय थियो ... उनले म्याडोडोलाई त्यतिबेला विश्वको उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा चुनौती दिए। "- Bryan Robson
"पिचमा सबैभन्दा बुद्धिमान खेलाडी मध्ये एक, उनले चाँडै चीजहरू हेर्न सक्थे र चीजहरू गर्थे।" - गैरी मोबबत
"उहाँ प्यारी केटा, प्यारी, त्यस्तो हृदय हुनुहुन्थ्यो। तर एक परेशान केटा उनले नाश्ताको लागि आइसक्रीम खाए, उनले दोपहरको भोजनको लागि बियर पिए ... तर एक खेलाडी? ओह, सुन्दर, सुन्दर। " - डिनो Zoff
"उनले मलाई पाँच जोडी जोडे र एक माछा मार्ने किट दिए। मलाई थाहा छैन किन किन, तर यो उहाँ जस्तै थियो। " Alessandro Nesta
"नमस्कारमाs प्रधानमन्त्री, एचई संसारको सबैभन्दा राम्रो खेलाडी मध्ये एक थियो। उनीहरूले बललाई बलियो बनाएर राउन्डलाई पराजित गरे जसले उनलाई प्रतिद्वंद्वियोंका लागि अविश्वसनीय बनाएको थियो। " - ब्रायन लाउडोप
"मेरो जीवनकालमा धेरै उत्कृष्ट अंग्रेजी खेलाडीहरू छैनन्। कसैले पनि उनीहरूको कंधेलाई Gazza जस्तो छोडेनन्। " - रे पार्लर
"सम्भवतः राम्रो खेलाडी मैले खेलाएको। मैले के भन्न सक्छु? उहाँ एक महाराज हुनुहुन्छ, उहाँले भर्खरै सबै कुरा गर्नुभयो। " - पल इन्स
"म भन्न सक्छु कि उनले शायद सबै भन्दा उत्कृष्ट अंग्रेजी खेलाडीलाई मैले देखेको छु, र निश्चित रूपमा सर्वोत्तम।" - वेन रोनी
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पावल Gascoigne बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
मरिचियो पोकटेटोनो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य